Akwụkwọ Juliette Anderson na Martech Zone |
Edemede site na Juliette Anderson kwuru
Juliette Anderson kwuru
Juliette Anderson bụ ọkachamara ọkachamara nke obodo maka ụlọ ọrụ mmezu e-commerce nke ọkachamara na ịmekọrịta na ndị na-ere ere n'ịntanetị bụ ndị nwere nkezi ngwugwu nke 5 + pound ma ọ bụ karịa. Ọ na-arụ ọrụ aka na ụlọ ahịa e-commerce iji nweta ezigbo ahịa maka afọ anọ. Ọpụrụiche ya dị na mgbasa ozi mgbasa ozi na ịkwalite mgbasa ozi.
E-commerce Product Nyocha: Ebumnuche 7 Ihe Mere Nyocha N’ịntanetị Dị Mkpa Maka Ahịa Gị
Mọnde, Jenụwarị 14, 2019 Thursday, May 7, 2020 Juliette Anderson kwuru
Otu onye nwere ike ịchọpụtala otu ọ na-esiwanyewanyewanye maka azụmaahịa, ọkachasị maka ndị nọ na ngalaba azụmahịa, ịgụnye nyocha na weebụsaịtị ha. Nke a abụghị ihe gbasara njakịrị, mana mmepe nke gosipụtara na ọ ga-arụ ọrụ dị ukwuu n'inweta ntụkwasị obi ndị ahịa. Maka azụmahịa e-commerce, ọ dị mkpa iji merie ntụkwasị obi nke ndị ahịa, ọkachasị ndị nke mbụ, ebe ọ bụ na ọ nweghị ụzọ ha ga-esi hụ